Sidee si ay u gudbiyaan music aad android
1. Sidee si ay u gudbiyaan Music From Android
Android waxaa revolutionizing adduunka technology la darbi ay sida telefoonka iyo kiniiniyada. Lahaanshaha qalab android waxa aad ka dhegeysan kartaa muusikada iyo daawato videos music ka. Waxaa jira yimaado xaalad ah in aad leedahay playlist aad jeceshahay on your computer oo aad jeclaan lahayd inaad wareejiso aad telefoonka gacanta android. Sidee baad u gudbin doona? Ma suurogalbaa in sidaas la sameeyo? Jawaabtu waa haa; kuu soo gudbin kartaa music nasteexo isticmaalaya Wondershare app ama isticmaalaya cable xogta USB ah. Ogolaano eegto hab kasta ee
1.1 Isticmaalka cable USB si ay u gudbiyaan music ka kombiyuutar si ay Android
Iyadoo qalab android aad ka your computer in qalabka kala soo bixi kartaa music. Hubi in qalabka in xogta loo wareejiyey ayaa meel xasuus ku filan. Waxaad ballaarin karaa xasuusta la SD kaararka sixir la heli karo. Markaas isticmaali cable USB ah u xiri phone in kombiyuutarka. Tani waxay u shaqeeya labada Windows iyo Mac.
Tallaabada 1. Iyadoo Mac aad u baahan tahay in aan isku xirno Cable USB Android inay Mac.
Waxa lagu talinayaa in la isticmaalo cable USB in aad soo iibsatay qalab android aad u
Tallaabada 2. Markaas furo shaashadda aad telefoon android ama kiniin.
box amarka A arbushin doonaa ilaa aad android u sheegaya in aad "Mount" telefoonka in computer si ay nuqul ka files. Tubada on "Mount"
Tallaabada 3. Hadda noqda Mac,
kaarka SD ama disk muuqan doonaa shaashadda. Fur aad disk iyo dooran file music aad rabto in lagu wareejiyo waxay u.
Tallaabada 4. Jiid folder u doortay inay kaarka SD shaashadda.
Waxa kale oo aad nuqul ka heli karto gal file music markaas waxa ay nuqul kaadhka SD aad. Waqtiga ay ku qaadan doonto in aad nuqulka ku xiran tahay tirada file music.
Tallaabada 5. Marka socodka hawsha oo idil waa dhameystiran yahay, tuurid Card SD ah.
Dul dulqabo in "Finder" ka dibna riix on file iyo hoos u dhaqaaq tuurid. Waxa aad dhakhso u isticmaali kartaa amarka + E in tuurid.
Iyadoo daaqadaha aad u baahan tahay in ay raacaan tilmaamaha la mid ah
1. Connect qalab Android aad si aad u computer
2. Unlock shaashadda ee qalabka android si aad u awoodo "Mount" kaarka SD.
3. Aad kombuutarka ay tagaan "My computer" iyo furi disk ka saari karo taas oo ah kaarka SD aad.
4. Dooro music folder la doonayo oo nuqul aad disk
1.2 Isticmaalka Wondershare Mobile Go si ay u gudbiyaan Music Files
Inkastoo wareejinta music ka your computer si Android waa suurto gal, waxaa jira ayna duleella in ka dhigi doonaa aadan raaxaysatid music. Marka hore, haddii uu jiro gabay la qaab aan waafaqsanayn qalab aad u ma doono la ciyaari doono qalab aad. Marka labaad, haddii aadan haysan cable USB ama mindhaa waa la jebiyey ka dibna aad kuma wareejin karaan faylasha aad. Si looga hortago, kuwaas oo caqabado aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo app WonderShare.
Wondershare Ayaa loogu talagalay in ka MobileGo Wondershare u android labada daaqadaha iyo Mac.
Iyadoo app this aad nuqul karo files badan music mar sidoo kale kaga dayanayaan oo dhan qaabab file. App Tani waa cut a kor ku xusan inta kale tan iyo markii ay optimizes files in uma lihin qalab android in MP3. Oo weliba app this waa la jaan qaada oo dhan kiniiniyada android, phone sida Samsung iyo qalabka HTC. Sidaa darteed soo bixi app oo wuxuu ku raaxaysan kala iibsiga effortless ee files music
Tallaabada 1. Isku aad android aad PC
ka dib rakibidda ka Wondershare app android on your computer, waxaad u baahan tahay link aad telefoon android waa in. Barnaamijkan wuxuu kuu soo laba siyaabood oo isku xira qalab android aad. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Wi-Fi ama cable USB ah. Isla marka aad u xirmaan android waxaa la ogaan doonaa on your computer.
Kombiyuutar dhaqaaq Step.2 music si ay Android
Marka android la arki karo oo ku saabsan suuqa kala tagaan oo ay u "Music," ka dibna riix "dar." Waxa kale oo aad dajiyaan karaa music ka Lugood adigoo gujinaya "Add". Sida muusiga loo wareejiyey xogta leheyn waxaa sidoo kale diinta MP3 si ay u ciyaari kartaa Android. App Tani waa sida si ay u tagaan marka ay timaado music kala iibsiga, sababta oo ah qaab ciyaareed wanaagsan iyo isku halaynta si user ah.
2. Sidee si ay u gudbiyaan iyo record music on YouTube isticmaalaya taariikhqorihii Streaming Audio
Waxaa laga yaabaa inaad la ciyaaro music on YouTube, Pandora, Rhapsody, Napster ama Spotify oo aad jeclaan lahayd inaad iyaga u qoraan on your computer. Waxa ay noqon kartaa song aad jeceshahay iyo waqti aadan awoodi karin in ay u ciyaari online mar kasta oo aad ka fekereyso sameynaaya o kiniin. Wondershare Streaming Audio Recorder yahay waxaa aad u qabsadaan songs, kuwaas oo, Rikoorka albums ay horyaal, magaca artist iyo horyaalka ee heesta. Tayada taariikhqorihii heesta waa mid tayo kaamil ah. In dhamaadka aad si guul leh ku isticmaali kartaa Cajalado duubay sidii aad ringtone. Halkan waxa aad u baahan tahay
Download ku Streaming Audio Recorder oo ku xidh on your computer. Waxaa jira ee version daaqadaha iyo version Mac .
Step.2 Record Songs From Online Stream
On codsigaaga riix "Record" badhanka. Markaas wadi goobta wax. Firkradahaan dhihi YouTube, ciyaaro hees aad doorato. Sida aad la ciyaareyso heesta la duubi doono marka lagu sameeyo app aad wargelin doonaa.
Step.3 Transfer Music duubo si ay Lugood
ayaa lagala soo bixi MP3 music ama qaab M4A waa la jaan qaada Lugood, sidaas waa inaad u si Lugood aad ku wareejin karaa. Si fudud u dooro heeso iyo guji Add to Lugood. Ugu Lugood aad diyaarin kartaa heeso habka aad rabto. Sidee fudud waa. halkaas ka in aad telefoonka aad android wareejin karaan music isticmaalayo tallaabooyinkan aan wada hadlay ka hor.
3. Sidee si ay u gudbiyaan Music From Si Android isticmaalaya MobileTrans
Technology ayaa nolosheena fudud marka ay timaado wareejinta faylasha u dhexeeya qalabka. Iyada oo wax ka beddelid casriga nahay ee aan wadaagno karaa daqiiqado naga xiiso asxaabta iyo qoysaska kaliya click ah. Kuwan oo dhammu waa suurta xiiso Wondershare app, MobileTrans . App Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad files ka phone jir wareejiyo phone cusub. The faylasha sida Music, xiriirada, wac abuse jadwalka video iyo in ka badan. App wuxuu taageeraa ma aha oo kaliya in ka badan 3000 telefoonada laga heli karo suuqa laakiin sidoo kale halis. Ha ii tuso sida music kala iibsiga ka phone in Android ka dib markii degsado Trans Mobile ka app
Step1.Connect Your Phones in Computer Your
Iyadoo MobileTrans on your computer aad u baahan tahay in lagu xiro labada qalabka la your computer iyadoo la isticmaalayo cable USB. Markaas riix Start. App Tani waxay taageertaa telefoonada Symbian Android iyo macruufka; Sidaas darteed waa in aad ka welwelin in sharcigaasi waafaqsan.
Tallaabada 2.Transfer ayaa Music Files
Ugu xarunta ah ee shaashadda waxaad arki doontaa liis ay ku qoran oo dhan jeer aad ka bilowda music, xiriirada, mails fariimaha. Hubi ku saabsan waxyaabaha aad rabto in aad wareejiso oo guji
Waayo aragnimada xiiso Wondershare Apps ah, MobileTrans kala iibsiga xogta aad u dhexeeya telefoonada, Wondershare Streaming Audio Recorder inaad kala soo baxdo aad music Online oo cajiib ah Wondershare MobileGo u music kala iibsiga ka Computer si ay u qalab Android. Kuwani Chine oo dhan waxay leeyihiin daaqadda iyo Mac Version.
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Music si aad Android